5 Su’aalood Oo La Ogaaday In Ay Raggu Ka Didaan Waydiintooda, Dumarkuna Mar Walba Su’aalaan!! - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle 5 Su’aalood Oo La Ogaaday In Ay Raggu Ka Didaan Waydiintooda, Dumarkuna...
Inkasta Oo Lagu Kala Duwan Yahay dhaqanka iyo diinta ay haystaan shucuubta aduunku hadana waxa jira arrimo door ah oo rag iyo haweenba dhinaca jinsiga laga siman yahay gaar ahaan marka ay timaad wada noolaanshaha lamaanaha iyo dareenka ka dhaxeeya. Haween badan oo kala diimo iyo kala dhaqmo ahi waxa ay ka siman yihiin arrimo badan oo ay isaga egyihiin marka ay timaad xagga qaab-nololeedka ka dhaxeeya ragga. Qormadan kooban waxa aynu ku eegi doonaa shan su’aalood oo cilmi-baadhisyo badan oo lagu sameeyey lagu ogaaday in ay raggu neceb yihiin in ay kala kulmaan haweenkooda balse haweenku in badan waydiiyaan kuna soo celceliyaan ragga. Si kale haddii aynu u dhigno waa shan su’aalood oo haweenku sida qaalibka ah ragga u qaddimaan lana ogaaday in ay raggu ka siman yihiin sida aanay u jeclayn su’aalahaasi. Haweenku marka ay su’aalahan ragga waydiinayaan kama ah in ay wax xumeeya is leeyihiin balse waxa aanay ka war qabin cidhiidhiga ay ku keenayso laabta ninka, iyada oo haweenku su’aalahan ku baadhayaan arrimo iyo dareemo hoose oo ku keydsan laabahooda. Waxaanay 5-taa su’aalood kala yihiin:
Maxaad Ka Fikiraysaa? Su’aashan marka haweenaydu ninkeeda waydiiso haddiiba ay ka dareento in uu yar baxsan yahay ama yar foofay, waxa ay ninka ku keentaa in uu diiqad dareemo isaga oo isku arka in qaddar ay tahayba haweenaydu xorriyaddiisa yaraynayso. Waxa uu dareemaa in sida uu doono haddii uu u fikiro ay habboon tahay in aanay haweenaydiisu waydiin waxa uu ku foogan yahay niyad ahaan. Arrinta layaabka lihi waxa ay tahay Jawaab kasta oo ninku ka bixiyo halkii uu ka fikirayay waxa la ogaaday in aanay haweenku 90% ku qancin jawaabta ay helaan iyaga oo intaa u qaata in uu majaro habaabiyey ee uu wax kale ku fikirayay!!.
Ma I Jeceshahay?, Su’aashani waxa ay ka mid tahay su’aalo in badan haweenku ragga waydiiyaan gaar ahaan waxa ay ku badan tahay haweenka reer galbeedka. Su’aashan cilmi-baadhis lagu sameeyey waxa lagu ogaaday in raggu u qaataan in haweenaydu ka shakisan tahay jacaylka uu u qabo taasina ku keento diiqad iyo in uu dhibsado su’aashaasi. Haddii uu ninku yahay mid xaaskiisa jecel, daacad u ah oo danteeda ka shaqeeya daryeelkoodana ogaada mar walba hadana ay su’aashani ku soo noqnoqoto ama uu la kulmo waxa ay taasi ku keentaa niyad xumo iyo cidhiidhi nafsi ah, aadbaanu u dhibsadaa jawaab rasmi ahna uma helo su’aashaasi. Waxa kale oo la ogaaday in aanay raggu jacaylka ay u qabaan haweenka ku cabbirin hadalo mac macaan iyo qosol iyo farxad balse ay raggu jacaylka ay u qabaan xaasaskooda ay ku cabbiraan dareen hoose oo qarsoon, daryeelka iyo ilaalintooda, aadna aanay u jeclayn in ay ereyo ku cabbiraan jacaylkooda, tusaale ahaan in ay yidhaahdaan waan ku jcelelahay iyo ereyo la mid ah.
Ma Aaminsan Tahay In Aan Basari Ahay? Haweenku sidoodaba waxa ay ka siman yihiin Jacaylka ay u qabaan in ay ku sifoobaan astaan fariidnimo ama haddii aynu si kale u dhigno Gaarinnimo. Ammaanta haweenka waxa qayb aad u ballaadhan ka ah in lagu sheego mid gaari ah oo hawsha reerkeeda iyo ta nafteedaba ka soo baxda. Gaarinnimadu waxa ay qayb weyn ka ahaan jirtay miqyaaska ama halbeegga lagu cabbiro muunadda haweenayda wanaagsan waxaana taasi la mid ah haween badan oo dunida dacaladeeda kala duwan ku nooli in ay jecel yihiin in lagu sheego mid gaari ama fariid ah. Iyada oo xaalku sidaa yahay hadana waxa la ogaaday in haween badani aanay ku qancin fariidnimadooda balse ay su’aalo badan ka waydiiyeen ragga ay la nool yihiin. Haween badan oo qiimayn dhinaca hab-dhaqanka ah lagu sameeyey ayaa la ogaaday in ay raggooda in badan waydiin jireen su’aal la xidhiidha in ay yihiin haween fariiddo ah iyada oo baadhitaankaasi lagu ogaaday in raggu aad u nece yihiin su’aal sidan oo kale u taalla.
Ma Aaminsan Tahay In Haweenaydaasi Iga Qurux Badan Tahay? Quruxda muuqaalkooda duleed iyo mid jidheedba waa tiir weyn oo ka mid ah tiirarka lagu qiimeeyo haweenka iyana isku qiimeeyaan oo ay aad u ilaashadaan. Quruxdu waa laba nool mid abuur ah oo qofka jidhkiisa la xidhiidha iyo mid uu kasbado oo la xidhiidha hadba hu’ga iyo waxa uu xidhan yahay iyo muuqiisa sare sida uu u qurxiyo. Su’aashani waxa ay ka mid noqotay su’aalaha sida qaalibka ah haweenku raggooda waydiiyaan ragguna la ogaaday in ay aad u neceb yihiin. Haweenku waxa ay suti gaashaan mar walba u hayaan in raggoodu indhaha ka laliyaan oo ay haween kale indhaha ku fiiqaan gaar ahaan marka ay timaaddo quruxda. Daawashada telefishanka, Filimada iyo bandhig-faneedyada marka la isugu tago haween badani waxa ay raggooda ka ilaaliyaan in qalbigoodu u jihaysto haweenay markaasi uu quruxdeeda la dhacay ama ugu yaraan dareen ka qaatay. “Miyaad Aaminsan tahay in haweenaydani iga qurux badan tahay?” waa su’aal aad ugu soo noqnoqta ragga, ragguna aad u necbaystaan waydiinteeda.
Haddii Aan Kaa Horreeyo Dhinaca Geerida Maxaad Samayn Lahayd Dabaday?Haween badani waxa ay is waydiiyaan haddiiba ay raggooda ka hor dhintaan waxa ay raggoodu samayn lahaayeen gaar ahaan dhinaca guurka. Haweenay noocee ah ayuu guursan lahaa? Imika miyay u sii calaamadsan tahay haweenay uu guursan lahaa haddii aad ka hor dhimato? Miyuu iska dayn lahaa oo ubadkiisa ayuu korsan lahaa? Haween badani waxa madaxooda ka guuxa su’aalahan sidaa darteed marar badan waxa ay raggooda waydiiyaan su’aalahan iyo kuwo la mid ah, waxaana la ogaaday in ay raggu aad u neceb yihiin su’aashan in lagu soo celceliyo ama la waydiiyo. Waxa uu samayn lahaa ninku hadii ay xaaskiisu ka horrayso waa arrin aan degdeg looga jawaabin Karin, muhiimna ragga uma aha balse haween badani waxa ay is waydiiyaan waxa uu saygoodu mudan doono haddii ay ka horreeyaan.
Somaliland: Xildhibaanno Taageeray Muddo Kordhinta Xukuumadda Iyo Golaha Wakiiladda
Fanaanada Nasteexo-Indho oo ka hadashay jabkii Hargeysa ay kala kulantay iyo Showgeeda oo Xaaraan lagu tilmaamay